Wasiirka Arrimaha Gudaha General Muqtaar iyo Odayaasha Dhaqanka Hiiraan oo heshiis hordhac ah gaaray - Home somali news leader
Home NEWS Wasiirka Arrimaha Gudaha General Muqtaar iyo Odayaasha Dhaqanka Hiiraan oo heshiis hordhac...
Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Janeraal Muqtaar Xuseen Afrax oo shalay gaaray magaalada Baladweyne ayaa la kulmay qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyagoo ka wadahadlay xiisada ka jirta magaalada Beledweyne.
Kulanka ayaa waxaa ay uga hadlayeen sidii loo dejin lahaa xiisada ka dhalatay safar la sheegay in Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen uu ku imaan lahaa magaalada Beledweyne, taas oo sababtay in saaka ay dagaalamaan Maleeshiyaadka uu hoggaamiyo General Abuukar Xuud ee diidan safarka Madaxweyne Guudlaawe iyo ciidamada dowlada ee ku sugan Beledweyne.
Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha Soomaaliya Janeraal Muqtaar Xuseen Afrax iyo qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ee kulmay ayaa waxa ay ku heshiiyeen qodobo lagu dejinayo xiisada ka jirta Beledweyne.
Qodobada ayaa waxaa ka mid ahaa In dib loo dhigo safarka Madaxweynaha Hirshabelle inta xal laga gaarayo khilaafka jira isla markaana la xalinayo tabashada ay qabaan dadka ka soo horjeeda Madaxweyne Guudlaawe.
2: In Ciidamada Dowladda aysan awood Ciidan u adeegsan dadka diidan dhismaha Maamulka Cusub ee Hir-Shabeelle, kuwaas oo maalamahaan banaanbaxyo ka waday Magaalada Beledweyne.
3: In Odayaasha Dhaqanka ay xiisada dejiyaan sidoo kalena ka qeyb qaataan sidii loo furi lahaa wadooyinka ay xireen dadka banaanbaxa ka dhigayay magaalada Beledweyne.
Magaalada Beledweyne ayaa waxa saaka ka dhacay iskahorimaad hubeysan oo ay dad ku dhaawacmeen iyadoo dadweyne faro badana ay banaanbax ka dhigeen gudaha magaalada.
Previous articleA decade later, Strauss-Kahn to give his version of New York sexual abuse
Next articleC/raxmaan C/shakuur “Kacdoonka shacabka ee Hiiraan waa natiijadii ka dhalatay dib u heshiisiintii….”